Nei Nei Kambani Yako Ichifanira Kubhadharira Yakagadziriswa DNS? | Martech Zone
Ipo iwe uchikwanisa kunyoreswa kwedomain kune domain registrar, haisi nguva dzose zano rakanakisa rekubata kupi uye sei domain yako inogadzirisa zvese zvayo zvimwe zvinopinda zveDNS kugadzirisa yako email, subdomains, inomiririra, etc. Domain domain registrars 'bhizimusi rekutanga ndizvo kutengwa madomeni, kwete kuona kuti dura rako rinogona kugadzirisa nekukurumidza, kutarisirwa zvirinyore, uye rine redundancy yakavakirwa-mukati.
Chii chinonzi DNS Management?
DNS Management mapuratifomu ayo anodzora Domain Name System server masumbu. Dhata yeDNS inowanzoendeswa pane akawanda maseva epanyama.
DNS inoshanda sei?
Ngatipei mienzaniso yangu yeyangu saiti kumisikidzwa.
Mushandisi anokumbira martech.zone mubrowser. Chikumbiro icho chinoenda kune server yeDNS iyo inopa nzira inoenda kunochengetwa iyo http chikumbiro… muzita rezita. Ipapo zita server rinobvunzwa uye yangu saiti inomiririra inopihwa uchishandisa A kana CNAME rekodhi. Ipapo chikumbiro chinoitwa kune yangu saiti inomiririra uye nzira inopihwa kumashure iyo yakagadziriswa kubhurawuza.
Mushandisi na martech.zone mu browser. Chikumbiro icho chinoenda kune server yeDNS iyo inopa nzira inoenda kunochengetwa tsamba iyoyo… muzita rezita. Ipapo zita server rinobvunzwa uye yangu email yekutambira mupi inopihwa uchishandisa MX rekodhi. Ipapo iyo email inotumirwa kune yangu email yekutambira kambani uye kuendeswa nenzira kwayo kuinbox yangu.
Pane mashoma akakosha maitiro eDNS Management ayo anogona kugadzira kana kutyora sangano iro mapuratifomu anokubatsira kugadzirisa:
havukavu - Iyo inokurumidza yako DNS zvivakwa, iyo inokurumidza iyo zvikumbiro inogona kuendeswa uye kugadziriswa. Uchishandisa premium DNS manejimendi manejimendi inogona kubatsira nehunhu hwevashandisi uye nekutsvaga injini yekuonekwa.
utariri - Unogona kucherechedza kuti kana iwe ukagadzirisa DNS pane domain registrar, iwe unowana yakajairwa mhinduro kumashure izvo shanduko dzinogona kutora maawa. Iyo DNS Management chikuva shanduko ingangoita mune chaiyo-nguva. Nekuda kweizvozvo, iwe unogona kudzikisa chero njodzi pasangano rako nekumirira kugadzirisa yakagadziridzwa DNS marongero.
Redundancy - Ko kana iyo domain registrar's DNS ikakundikana? Kunyange izvi zvisiri zvakajairika, zvakaitika nekumwe kurwisa kweDNS kwepasirese. Mazhinji mapuratifomu eDNS manejimendi ane akawandisa DNS failover kugona ayo anogona kuita kuti basa rako-rakakosha mashandiro arambe achimhanya mune chiitiko chekudzima.
ClouDNS: Kurumidza, Mahara, Yakachengeteka DNS Kubata
CloudDNS mutungamiri mune ino indasitiri, achipa inokurumidza uye yakachengeteka DNS Hosting. Ivo vanopa imwe tani yeDNS masevhisi ayo anotanga neyemahara DNS yekutamba account nzira yese kuburikidza neakavanzika maSeva eDNS esangano rako:
Dynamic DNS - Dynamic DNS ndeye DNS sevhisi, iyo inopa sarudzo yekuchinja iyo IP kero yeimwe kana akawanda DNS marekodhi otomatiki kana iyo IP kero yemuchina wako yashandurwa musimba neinternet Provider.
Sekondari DNS - Iyo Sekondari DNS inopa nzira yekugovera iyo DNS traffic yezita rezita kune vaviri kana vanopfuura maDNS vanopa kune akanakisa ekupedzisira nguva uye redundancy nenzira yakapusa uye ine hushamwari nzira. Iwe unogona kudzora iyo DNS marekodhi ezita rezita chete kune imwechete (Yekutanga DNS) mupi uye wechipiri mupi achishandisa Sekondari DNS tekinoroji inogona kuchengetwa kusvika pari zvino uye yakawiriraniswa otomatiki.
Dzorera DNS - Reverse DNS sevhisi yakapihwa naClouDNS ndeye Premium DNS sevhisi ye IP varidzi varidzi uye vashandisi uye haina kuiswa muhurongwa hweMahara. Iyo Reverse DNS yekutambira ndeye bhizinesi kirasi sevhisi uye inotsigira zvese IPv4 uye IPv6 Reverse DNS nzvimbo.
DNSSEC - DNSSEC inoonekwa yeiyo Domain Name System (DNS) inosimbisa mhinduro kune domain zita lookups. Iyo inodzivirira vanorwisa kubva mukubiridzira kana kuisa chepfu mhinduro kune zvikumbiro zveDNS. DNS tekinoroji yakanga isina kugadzirirwa nekuchengetedza mupfungwa. Mumwe muenzaniso wekurwiswa kweDNS zvivakwa ndeye DNS spoofing. Mumamiriro ezvinhu akadaro anorwisa anobata cache yekugadzirisa DNS, zvichikonzera vashandisi vanoshanyira webhusaiti kuti vagamuchire isiriyo kero ye IP uye voona saiti yakaipa yeanorwisa panzvimbo peyavaida.
DNS Failover - Yemahara DNS Failover sevhisi kubva kuClouDNS iyo inochengeta ako masayiti uye webhu masevhisi pamhepo mune chiitiko chegadziriro kana network yekubuda. NeDNS Failover iwe unogona zvakare kufambisa traffic pakati peyakanyanya network kubatana.
Kutungamirirwa DNS - Managed DNS ibasa rakachengetedzwa zvakazara nehunyanzvi DNS inomiririra kambani. A Managed DNS Provider inobvumira vashandisi kubata yavo DNS traffic nekushandisa web-based control pani.
Anycast DNS - Anycast DNS ipfungwa yakapusa - unogona kusvika kune imwe nzvimbo kwaunotevera nzira dzakawanda dzakasiyana. Panzvimbo pekuti traffic yese iende munzira imwe, Anycast DNS inoshandisa nzvimbo zhinji dzinogamuchira mibvunzo kunetiweki, asi munzvimbo dzakasiyana dzenzvimbo. Chinangwa apa ndechekuti network iwane nzira ipfupi yemushandisi kune imwe DNS server.
Enterprise DNS - ClouDNS 'Enterprise DNS network yakagadzirirwa kugadzirisa mamirioni emibvunzo sekondi yega yega. Yemhando yavo yemitengo haina kubva pakubvunza kubvunza. Iwe hauchazombobhadhariswa pamakwenzi ako uye mazita emadunhu ako haazombomira kushanda, nekuda kweDNS query miganhu. Iwe hausi kuzobhadharirwa chero rudzi rweDNS query mafashama.
SSL Zvitupa - SSL Zvitifiketi zvinodzivirira yako yemunhu mutengi data kusanganisira mapassword, makadhi echikwereti, uye ruzivo rwekuzivikanwa. Kuwana SSL chitupa ndiyo nzira iri nyore yekuwedzera kuvimba kwevatengi vako mune rako bhizinesi repamhepo.
Yakavanzika DNS maseva - Yakavanzika DNS maseva akazara machena-chitaridzi DNS maseva. Paunowana Yakavanzika DNS server, ichave inosanganiswa ne network yavo uye webhu interface. Iyo Server ichave inochengetwa uye inotsigirwa neayo masystem manejimendi uye iwe uchave unokwanisa kubata ako ese madomains kuburikidza neClouDNS webhu interface.
CloudDNS iri Managed DNS mupiki kubvira 2010. Basa ravo nderekupa akanakisa maDNS masevhisi papasi. Ivo vari kugara vachivandudza uye vachiwedzera yavo samambure kudarika indasitiri zviyero uye vanounza vatengi iyo yepamusoro ROI. Yadzo Anycast DNS zvivakwa inosanganisira 29 akasiyana data nzvimbo dziri munyika 19 pamakondinendi matanhatu.
Iko hakuna akawandisa nguva kuti iwe unogona zvese kuchengetedza mari uye kuwedzera iyo redundancy, kumhanyisa uye kuvimbika kweako epamhepo zvivakwa - asi ndizvo chaizvo zvatakaita. Ingo tsvaga DNS kubuda uye ona kuti mangani makambani anga aine nyaya nekuvimbika kwavo kweDNS.
Saina Kuti Uwane Mahara ClouDNS Akaunti
Ongorora: Iyi yekubatanidza yakapihwa muchinyorwa chino yedu yemubatanidzwa link.
Tags: rekodhimakorecname rekodhiDNSdomain name managementdomain name serverDomain name server kumhanyaresolution yedomainkumhanya kwesizindayakagadzirirwa dnsmx rekodhizita serverkumhanya saitihavukavu